I-Semalt ichaza ukuthi ungayisebenzelana kanjani nabadlulisi bogaxekile
Ukuthola ithrafikhi eyanele kungaba iphupho ligcwaliseke kuwo wonke umthengisi we-intanethi. Ngenxa yalokho,abantu basebenzisa izindlela ezahlukene ukuthola traffic online. I-Inthanethi iyisisetshenziswa esikhulu esingenza i-website ithole izivakashi eziningikusuka emakhonkeni ahlukahlukene omhlaba. Amawebhusayithi amaningi aphumelelayo ayazi amandla okumaketha oku-intanethi. Baqasha ama-SEO agenti ukwenza ezinyeamasu wokuthengisa digital ezifana nokukhangiswa kokuqukethwe. Abanye baphumelela kakhulu ekutholeni ama-backlink ngokusebenzisa i-Social Media Marketing(SMM). Ngenxa yalokho, kubalulekile ukusebenzisa izindlela ezifanele zokumaketha zedijithali kulezi zinombolo bese ufeza okusemandleni akho. SeshaI-Engine Optimization (SEO) ihlanganisa izindlela ezihlukahlukene zokwenza isu lokusakaza inthanethi eliphumelelayo. Ingakwazi ukuthuthukisa konkeezinye izindlela ezifana nokusekela emuva nokuthola izincwadi.
Nokho, uMichael Brown, the i-Semalt Umphathi Wempumelelo Yekhasimende, angathanda ukukukhumbuza ukuthi ezinye izigaxekile nazo izindlela eziningi zokuthola phakathi komsebenzi we-digitalumthengisi kanye nemigomo yabo. Abathungi abaningi be-spam sebenzisa amasu afana nokuvakashelwa kwekhasi le-faking ukuheha umphakathi ekuchofozeni izixhumanisi ukuze kwenzekeamawebhusayithi awingozi. Kwezinye izimo, u-spam uqukethe ama-Trojans kanye ne-malware akhona ku-virus noma ikhodi ngaphakathi kokubulawa kwe-call-to-action nomaezinye izinamathiselo ezikhuthaza ukuthi isisulu sicindezele. Ezimweni eziningi, ungathola okuningi kwezithuthi ku-Google Analytics yakho.Noma kunjalo, lokhu kuhweba kungenzeka kungabonakali kudeshibhodi yakho noma kwamanye amathuluzi, ahlaziya ukusebenza kwamakhasi akho ewebhu. Isibonelo esihlelezo zixhumanisi zokudluliselwa, ezivela kuDarodar.Com. Ungakwazi ukugwema ukufutheka kokuhlaselwa okunjalo futhi usebenzise okuningi amasu kulesi sihloko..
Ungavimbela kanjani ukuxhunyelwa kogaxekile?
Kunesidingo esikhulu sokuvimbela ezinye zokudluliselwa kogaxekile zama ukuxhumanaibhulogi yakho. Lesi silinganiso singavikela ukuphepha kwewebhusayithi yakho nokugcina abaduni kude nezilaleli zakho. Iningi lezinyosi zewebhu lewebhuisenzo kuphaneli yokuphatha. Isibonelo, ungasebenzisa ukubethela okunye kuphaneli yakho yokuphatha kanye ne-Google Analytics. Kukhona futhiizihlungi eziningi zogaxekile ezikhona kubasebenzisi be-inthanethi nabanye abantu abanentshisekelo ekwenzeni ukuqhutshwa kwe-inthanethi ephephile. Kulezi zihlungi,kubalulekile ukushiya isihlungi lapho ungabuka khona imilayezo ebalulekile. Izihlungi zingabona amanye ama-imeyili athembekile njengogaxekile. Ekugcineni,Ukudala ukuqwashisa emphakathini wakho kungaba yisilinganiso esihle. Le nkohliso inganciphisa ukuhlaselwa kogaxekile ekupheleni kwesikhathi. Lezi zingabandakanya lezoabaduni abakhomba ikheli le-imeyli lekhasimende ukuze babambe amaphasiwedi.
Wonke amabhulogi e-intanethi noma iwebhusayithi ye-e-commerce idinga ithrafikhi. Ngenxa yalokho, zikhonaamasu amaningi wokuthengisa oku-intanethi, angathumela ithrekhi kwisayithi lakho. Ezinye zalezi zindlela zisebenzisa amaqhinga amhlophe amasha uma abanye bezisebenzisaamaqhinga amnyama omnyama. Ezimweni eziningi, izinkampani zisebenzisa izindlela ezimhlophe ezimhlophe ezifana nokumaketha kokuqukethwe, i-SEO kanye nokukhangisa kwe-Social Media. Ukudluliselwaizimoto zakha ingxenye ebalulekile yokuguqula amaklayenti. Kodwa-ke, uma kuziwa kubathumeli bogaxekile, kungabiza imizamo ye-SEO njengobakanye nezinkinga eziningi ezifana nezinsongo ze-cyber. Ungagwema abathumeli abagaxekile njengeziqongo ze-darodar.com nokusebenzisa okuningi lokhu mhlahlandlela. Ngaphezu kwalokho,lo mhlahlandlela ungakusiza ukuvikela ukuphepha kwe-traffic yakho nabathengi be-intanethi.